शुक्रबार, बेलुका ८ बजे
रात्रि जीवनकालागि सुपरिचित ठमेलमा लुकीछिपी यौन व्यवसाय पनि चल्ने गर्छ। यहाँका केही मसाज सेन्टर, स्पा, डान्स बार, नाइट क्लब र होटलमा यौनधन्दा हुने तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ नै हो।
पहिले केशरमहल चोकदेखि नै झिलिमिली देखिने ठमेल शुक्रबार बेलुका सुनसान थियो। सडकका दायाँ–बायाँ बसेर‘जाने हो, जाने हो’ भन्दै पछि लाग्ने यौनकर्मीहरू सञ्चयकोष भवन नपुग्दै भेटिन्थे।
नरसिंह चोकैमा प्रहरीको गाडी रोकिएको थियो। केही विदेशी तथा स्वदेशी यताउता गरिरहेका थिए। ठेलामा चिया र खाजा बेच्ने पसलेवरिपरि झुम्मिएर चुरोट तानिरहेकाथिए, केही युवती। उनीहरू यौनकर्मी थिए। उनीहरूले ग्राहकसँगबार्गेनिङ गरिरहेको परैबाट सुनिन्थ्यो।
एक जना अन्दाजी २५/२६ वर्षकी यौनकर्मी र एक जना पुरुषबीच यस्तो संवाद चलेको थियोः
‘यस्तो कोरोना फैलिरहेका बेला कहाँ जानु ? कोरोना स¥यो भने के गर्ने नि ?’
‘हामीलाई कोरोना सोरोना केही छैन, दाइ। हामी पूरै क्वारेन्टाइनमा हो। एकदम सुरक्षित। मास्क छ, हातमा पञ्जा पनि लगाउँला।मसँग स्यानिटाइजर पनि छ।’
‘मास्क किन नलगाएको त ?’
‘मास्क लगाएर बस्यो भने कसले लैजान्छ र ?सबैलाई राम्री चाहिन्छ। त्यही भएर घरबाट यहाँ आउञ्जेल मास्क लगाएपनि यहाँ आएपछि मास्क खोलेरै बस्ने हो।’
ती पुरुषले अभिरुचि नदेखाएपछि यौनकर्मी युवती अन्य पुरुषसँग कुरा गर्न थालिन्।
ठमेलमा यौनकर्मीहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। त्यहाँ यौनधन्दा चलिरहेको प्रस्ट देखिन्थ्यो। प्रहरीले पनि कुनै वास्ता गरेको देखिएन। यौनकर्मीहरूको साझा भनाइ छ, ‘वर्षैभरि कोठामा थुनिएर हाम्रो पेट कसले पालिदिन्छ?’
आइतबार, राति ९ बजे
चाबहिल चोकदेखि ओम हस्पिटलअगाडिको सडक किनारमा यौनकर्मीहरू ग्राहक कुरेर बसेका थिए। ठमेल र लाजिम्पाट क्षेत्रमा सडकमा उभिएर ग्राहक खोज्ने तेस्रोलिंगी यौनकर्मीलाई प्रहरीले लखेट्न थालेपछि चाबहिल चोकलाई तेस्रोलिंगी यौनकर्मीले ग्राहक खोज्ने नयाँ ‘स्पट’ बनाएको एक जना यौनकर्मीले बताइन्।
आइतबार राति ९ बजेतिर त्यहाँ पुग्दा केही तेस्रोलिंगी यौनकर्मी भेटिए। उनीहरू चुरोटको धुवाँ फुक्दै ग्राहकसँग मोलतोल गरिरहेका थिए।
एक जना अधबैँसे महिला र एक युवती सडकमा उभिएका थिए। लकडाउनभर कोठामा बसेकी ती युवती तीन दिनदेखि मात्रै कामको खोजीमा निस्किएको बताउँदै थिइन्। ‘कोरोनाको डर छैन, सुरक्षित ठाँउ छ’ भन्दै ग्राहकसँग कुराकानी गरिरहेकी थिइन्। फाट्टफुट्ट ट्याक्सी चलिरहेका थिए। ट्याक्सी ड्राइभरसँग पनि ती युवती ‘कोही छन् ?’ भन्दै कुरा गरिरहेकी थिइन्।
नयाँ बसपार्क, गोंगबु
शनिबार, राति ८ः३० बजे
साँझ पर्न थालेपछि नयाँ बसपार्कको पहेँलो पक्की पुलमा यौनकर्मीको चहलपहल सुरु हुन्छ। उनीहरू झुण्ड–झुण्डमा बसेर ग्राहकको प्रतीक्षा गर्छन्। बसपार्क वरपरका दृश्यले यौनकर्मीलाई कोरोनाको रत्तिभर डर नभएको प्रस्ट हुन्थ्यो।
एकजना किशोरी चुरोटको धँुवा उडाउँदै ग्राहक कुरिरहेकी थिइन्। केही महिलामा बाइकमा रहेका पुरुषसँग बार्गेनिङ गरिरहेका थिए। केही यौनकर्मी भने स्कुटरमा हालेर ग्राहकलाई लिएर जाँदैथिए। चिटिक्क पहिरनमा सजिएका तेस्रोलिङ्गीयौनकर्मी पनि ग्राहकको खोजीमा भौँतारिरहेका थिए।
एक जना खाजा पसलेले भने, ‘कोरोनाअघिभन्दा अहिले यिनीहरूको चहलपहल धेरै छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै साँझै पर्न नपाई ग्राहक खोज्न आउन थालेका छन्।’
बिहीबार, साँझ ७ बजे
साँझ ६ बजेबाटैरत्नपार्क क्षेत्रमा चहलपहल बढ्न थालेको थियो। फुटपाथका रेलिङमा अडेस लगाएर उभिएका थिए, केही यौनकर्मी।
बागबजारको आकाशेपुलको छेउमा दुई युवती आएर उभिए। केही समयपछि एक जना तेस्रोलिंगी पनि उनीहरूसँगै आएर बसिन्। उनीहरू उभिएको केही समयमै केही पुरुष आइपुगे र बार्गेनिङ गर्न थाले। कोही कुरा नमिलेर तर्केर हिँड्थे भने कोही अलि अगाडिसम्म पुगेर फेरि कुरा मिल्छ कि भनेर फर्केर पनि आउँथे।
वीरअस्पताल अगाडि बेलुका७ बजेपछि चहलपहल एक्कासि बढ्यो।
ती महिलाभन्दा केही अगाडि पनि तीनचार जना महिलाको समूह थियो। केही तेस्रोलिंगी पनि थिए। उनीहरूबाटोमा हिँड्नेपुरुषलाई इसारा गरिरहेका थिए। कोही आउँथे, कोही तर्केर हिँड्थे।
केही युवा भने बाइक रोकी–रोकी उनीहरूसँग कुराकानी गर्थे। दुई पक्षको बार्गेनिङ चल्थ्यो। ज्यादातर बार्गेनिङ टुंगोमा पुग्दैनथे।
कुरा मिलेपछि भने ग्राहकले यौनकर्मीलाई बाइकमा राखेर लैजान्थे।
लामो समयदेखि कुरिरहेकी वानपिसमा सजिएकी महिलालाई एकजना पुरुषले लम्बेतान कुराकानीपछि बाइकमा लिएर गए। यतिबेलासम्म वीर अस्पतालअगाडि यौनकर्मीको भीड देखिन्थ्यो।
म सबैलाई ‘एड्स त पचाइयो, कोरोना त के हो र ? त्यो पनि पचाइन्छ’ भनेर जवाफ दिन्थे,ँ’ उनले भनिन्।
कोरोनापछि ग्राहक घटेर कमाइ कम हुन थालेको उनले बताइन्। ‘पहिलाजस्तो कमाइ छैन,’ उनले भनिन्,‘पहिला हजारमा राजी हुने ग्राहक अहिले सयमा पनि राजी हुँदैनन्। धेरै पैसा आउने लोभले कतिसँग कन्डमबिनै राजी हुनुपर्ने अवस्था छ।’
तेस्रोलिंगी यौनकर्मीका वेदना
यौनकर्मी र ग्राहक दुवै जोखिममा
महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका लागि काम गर्ने कम्युनिटी एक्सन सेन्टर (सीएसी) नेपालकी संस्थापक तुलसा लता अमात्यले अहिले धेरै यौनकर्मी भोकभोकै रहेको, तर उनीहरूबारे कसैले पनि ध्यान नदिएको बताइन्। ‘उनीहरूका बारेमा अहिले न राज्यले सोचेको छ, न दातृ निकायले नै,’उनले भनिन्, ‘राहतका नाममा उनीहरूलाई एक दुई दिन खुवाएर मात्रै पुग्दैन। कोरोनाको अवस्था अझै कति लामो समयसम्म जान्छ भन्नेकुरा अनुमान गर्न सकिँदैन।’ २०७२ सालको भूकम्पमा पनि उनीहरूनै बढी मारमा परेको र अहिले कोरोना–कालमा पनि सबैभन्दा बढी उनीहरू नै जोखिममा रहेको अमात्यले बताइन्। ‘उनीहरूका लागि पहिला नै कुनै एउटा सेल्टर बनाउन सकिएको भए अहिले गाह्रो हुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूके लागि सेल्टर खोल्न एउटा संस्थाले मात्रै सक्दैन। यसका लागि राज्यले नै आफ्नो दायित्व सम्झिएर काम गर्नुपर्छ। सरकारले नै राहतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो।’ राहत मात्रै नभएर उनीहरूका निम्ति वैकल्पिक रोजगारी पनि सिर्जना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको अमात्यले तर्क गरिन्। ‘उनीहरूको अवस्था महिनौँसम्म कुरेर बस्ने खालको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले तुरुन्तै आयआर्जन हुने कामतिर उनीहरूलाई लगाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दा भोलिको दिनमा एचआईभीले महामारीको अवस्था लिन सक्छ।’
यौनकर्मी महिलाको हकहितमा सुनसरीकी विमला मल्लले लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेकी छिन्। उनले केही डोनरसँग हारगुहार गरेर केही यौनकर्मीलाई राहत पनि बाँडिन्। ‘तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन,’ मल्लले भनिन्, ‘कोरोनाले निम्त्याएको समस्यासँग जुध्न नसकेर केही यौनकर्मी महिलाले त आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेको पाइएको छ। उनीहरूबारे सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ।’
सीएमसी नेपालकी अध्यक्ष अमात्यले अहिले यौनकर्मी महिला मात्र नभएर उनीहरूका छोराछोरी पनि जोखिममा भएको बताइन्। ‘अहिले उनीहरूका छोराछोरीको स्कुल छैन,’ उनले भनिन्, ‘दिनभरि आमासँग बसेका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा ग्राहक घरमै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा बालबालिकाको मनस्थितिमा कस्तो असर पर्ने हो ? उनीहरूको मनोविज्ञान के हुने हो ?’ यो बेलामा यौनकर्मी मात्र नभएर उनीहरूको बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर राज्यका साथै सम्बन्धित संघसंस्थाले काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
रेकर्डमा नआए पनि केही यौनकर्मीले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने मानवअधिकारकर्मी शान्ति तिवारीले बताइन्। ‘कोरोनाले कमाइको वातावरण खोसिदिँदा धेरै यौनकर्मी दिदीबहिनी डिप्रेस्ड छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले उनीहरूले आत्महत्याको बाटो रोज्न थालेका खबर आउन थालेका छन्।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले लामो समयदेखि एड्स तथा यौन रोगका क्षेत्रमा काम गर्र्दै आएको छ। तर, कोरोनासँगै यसका कार्यक्रम रोकिएको सूचना अधिकारी लोकराज पाण्डेले बताए। ‘हामीले यौनकर्मीका हकमा कोरोना रोकथामका लागि केही गर्न सकेका छैनाँै,’ पाण्डेले भने, ‘यौन व्यवसायका कारण कोरोना संक्रमण फैलिने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। यौनकर्मीलाई सजग र सचेत बनाउनका लागि विभिन्न एनजीओले काम गरिरहेका छन्।’
‘ग्राहकबाट यौनकर्मीलाई खतरा छ’
कार्यकारी निर्देशक, जागृति महिला महासंघ
यौनकर्मीहरूको अहिलेको अवस्था देखेर हामी केही बोल्नै नसक्ने अवस्थामा छाँै । हामीले केही डोनरसँग कुरा गरेर यौनकर्मी महिलालाई राहत बाँडिरहेका छाँै । तर, १० किलो चामल र दुई किलो दालले उनीहरूलाई कति दिन पुग्छ ?अरू आवश्यकता पनि हुन्छन् । महिनावारीहुँदा लगाउने प्याडदेखि औषधिसम्मका कुरा आउँछन् । यौन पेशालाई गैरकानुनी भनिएको हुँदा धेरै यौनकर्मी खुलेर आउन चाहँदैनन् ।
यो बेला हामी यौनकर्मी महिलालाई आफ्नो पेशा ‘गर्नुस्’ भन्न पनि सक्दैनौँ,‘नगर्नुस्’ भन्न पनि सक्दैनौँ । हामीले गर्ने भनेको राहतको पहल हो । फोनमा उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरिरहेका छौँ । तर, जति काउन्सिलिङ गरेपनि यो दूरी बढाएर गर्ने पेशा होइन । कुनै कार्यक्रम र कार्यालयमा जस्तो दूरी कायम गरेर काम गर्न सम्भव छैन ।
नेपालमा यौनकर्मी छन् भन्नेकुरा राज्यलाई थाहा छ । तर, गैरकानुनी भन्दै यतातिर राज्यका कुनै पनि अंगले ध्यान दिएको देखिँदैन । धेरैले ‘यौनकर्मी महिलाले कोरोना सार्ने भए’ भनेको पनि सुन्न थालिएको छ । यो बिलकुलै गलत हो । उनीहरू कहिल्यै ग्राहक खोजेर हिँड्दैनन् । उनीहरूलाई खोज्दै ग्राहक आउँछन् । रत्नपार्क, ठमेल, नयाँ बसपार्कमा उनीहरू गएर बस्छन् । ग्राहक उनीहरूलाई खोज्दै आउँछन् । ग्राहक खोज्दै उनीहरू घर–घर जाँदैनन् । त्यसैले यौनकर्मीबाट ग्राहक होइन, ग्राहकबाट यौनकर्मी जोखिममा छन् । यस्तो महामारीमा पनि काम गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो ।
उनीहरूलाई पहिलाजस्तो सहज अहिले छैन । एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा जाने साधन छैन । होटल, रेस्टुरेन्ट बन्द छन् । भाडा तिर्न नसकेका कारण यौनकर्मीलाई घरबेटीले निकालिदिएका छन् । आफ्नो सानो ब्यागलाई नै घर बनाएर र बोकेर हिँडेका छन् । लकडाउनको बेलामा घरमा बस्दा ग्राहकको फोन आएर केही यौनकर्मी दिदीबहिनीलाई घरबाट निकालिदिएका घटना छन् । यो बेला धेरैको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । धेरै यौनकर्मी महिला गर्भवती भएका छन् । कतिले आत्महत्याको पनि प्रयास गरेका छन् । भूकम्पको बेलाभन्दा कोरोनाको बेलामा उनीहरूलाई धेरै समस्या परेको छ । टाउको दुखेमा एउटा ट्याब्लेटले काम गर्न सक्छ । तर, भोकलाई थालभरि भात नपस्की त्यसले मान्नेवाला छैन ।
‘यौन श्रमिकमाथि हिंसा बढेको छ’
यौनश्रमिक महिलालाई ‘काममा जानू वा नजानू’ भन्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन । अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको जोखिम उनीहरूलाई मात्र नभएर हामी सबैलाई छ । यसका लागि सरकारले सबैलाई सुरक्षित हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यौनकर्मी महिला पेट पाल्नकै लागि भए पनि काममा फर्किएका हुन् । कोरोनाले गर्दा काममा फर्केर पनि धेरैले ग्राहक पाएका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । यौनश्रमिकको अपराधीकरण गरिएको छ । जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो पहिचान खुलाएर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले लुकीछिपी भएपनि आफूले पहिलादेखि जे काम गर्दै आएका छन्, त्यही काममा फर्किएका छन् ।
उनीहरूलाई अपराधीजस्तो ठानिने हुनाले ‘म यौनकर्मी हुँ, मलाई सहयोग गर्नुप¥यो’ भन्दै कतै जाँदैनन् । हाम्रोमा कोही तेस्रोलिंगी, अपांग, बालकालिका, वृद्धवृद्धा भएर जाँदा सेवा–सुविधा पाइन्छ । तर, यौन श्रमिक हुँ भनेर कतै जानुभयो भने कुनै पनि प्रकारको सुविधा पाइँदैन । उल्टै, उनीहरूमाथि विभिन्न किसिमका लाञ्छना लगाइन्छ । हामीलाई अहिलेको अवस्थामा जे समस्या छ, यौन श्रमिकलाई पनि त्यही समस्या छ । तर, पेशाको कारणले उनीहरूमाथि विभेद भइरहेको छ । यसले उनीहरूमाथि झनै हिंसाका घटना बढाएका छन् ।
केही सघसंस्थाले उनीहरूका लागि भनेर चामल र दालको पोका दिने गरेका छन् । तर, कतिदिन अरूले दिएर हुन्छ ? कोही आफैँ बिरामी छन्, कसैका बच्चा बिरामी छन् । दुई किलो दाल लिनका लागि नागरिकता नभएकै कारणले धेरैले लडाइँ गर्नुपरेको छ । धेरैले उनीहरूको आयआर्जनको कुरा निकाल्छन् । आयआर्जन भन्नेबित्तिकै हामी सिलाइबुनाइ, ब्युटी पार्लरको टे«निङबारे सोच्छाँै । यौनकर्मीले त्यो कहिले सिक्ने, कहिले काम गर्ने, कहिले कमाउने अनि कहिले खाने ? उनीहरूका लागि अहिले तत्कालीन समाधान चाहिएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको चाहिँ उनीहरूलाई निरपराधीकरण गर्नु नै हो ।